Nbudata IRIS Tornado GR4 FSX-SP2 - Rikoooo
Iris ụgbọ elu ịme anwansị Software Panel mmelite site Danny Garnier na Rikoooo
Superb Tornado GR4 (Panavia Tornado) emegharịrị maka FSX-SP2 site rikoooo, naanị onye na-arụ ọrụ na ntanetị! Beenfọdụ ederede ejirila ma nweta usoro Alfa iji mee ka iko mee ka ọ pụta ìhè na ala nke opaque kokpiiti mebere.
Ihu ọma, nke a bụ ihe ochie payware nlereanya site Iris Ịme anwansị, ugbu a freeware.
The mgbe-burner mmetụta ndị kemmasi na omenala na-ada kwa. The nku nwere ike kekọrọ ka ukwuu penetration nke ikuku, dị nnọọ Lower flaapu menjuobi ka idokwa ha.
-Abịa na 11 ụdị (ọkọlọtọ, dị ọcha, mkpu wdg) na 10 pụrụ iche repaints
-Agụ akwụkwọ ntuziaka.
The Panavia tonado bụ a ugboelu multi-ọrụ fighter mepụtara njikota aka site Italy na UK na Germany na 1970s. Abụọ-seater, ejima engine, na variable jiometrị nku, e-emepụta fọrọ nke nta 1,000 mbipụta nyere na 1980s, na exported ka Saudi Arabia.
Ọ dị oke mma add-on.
Onye edemede: Iris ụgbọ elu ịme anwansị Software Panel mmelite site Danny Garnier na Rikoooo